Sweden oo ka hortegaysa banbaanooyinka guryaha lagu sameeyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sweden oo ka hortegaysa banbaanooyinka guryaha lagu sameeyo
La daabacay fredag 20 februari 2015 kl 15.31
Banbaanooyinka lagu sameeyo guryaha dhexdooda
Henric Östmark. Foto: Hansjörg Kissel / Radio Schweden
Mit diesem Apparat kann Sprengstoff aus weiterer Entfernung identifiziert werden (Foto: Hansjörg Kissel / Radio Schweden)
Banbaanooyinka lagu sameeyo guryaha dhexdooda ayaa noqday halis badana loo isticmaalo weerarada argaggixiso.
Sweden ayaa hadda ururka Midawga Yurub u xilsaaray in ay kordhiyaan da’daalada ka dhanka in walxahan guryaha dhexdooda lagu sameeyo loo adeegsado qaraxyada. Machadka qaabilsan cilmi baadhista gaashaandhiga ee magiciisa loo soo gaabiyo FOI oo ah goob ay adag tahay in maclumaad laga helo oo hawlaha uu wado, ayaa waxaa booqasho ku tegay Laanta Af-Jarmal ee Raadiyaha Sweden.
Dhisme ku yaal koonfurta Stockholm ayaa ku dhawaad labaataneeyo khuburo ahi ay ku hawlan yihiin sidii ay u ogaan lahaayeen waxyaabaha laga samayn karo walxa qarxa. Khubaradan ayaa isku taxalujinaya sidii ay u ogaan lahaayeen maaddooyinka guryaha lagu isticmaalo ee banbaano laga samayn karo iyo sidoo kale qaabka ugu wanaagsan ee boolisku uga hawlgeli karo, haddiiba ay helaan banbaano noocan ah.
Mashruucan balaadhan ee Midawga Yurub u igmaday Sweden oo ay ku baxayso lacag dhan rubuc bilyan karoon, Henric Östmark oo gudoomiye ka ah machadka cilmi baadhista arrimaha gaashaandhiga ee FOI
– Sweden waxay leedahay awood xirfadeed muddo badan oo la xidhiidha umuurtan. Isticmaalka walxa qarxaha ee ay sameeyaan dadka rayidka ahi waa mid lagu ikhtiraacay Sweden, waxaynu in badan haysanay wershedo iyo cilmi ku taxaluqa arrinkan. Halkan waxaanu ku haysanaa qalab asaasi ah oo aanu ku maarayn karno dhamaan noocyada kala duwan ee walxaha qarxa, oo ay ku jiraan kuwa lagu sameeyo guryaha dhexdooda, waxaanu u tijaabin karnaa si nabadgelyo ah.
Khabiirada wadda hawsha lagu ogaanayo banbaanooyinka lagu samaysan karo guryha dhexdooda, ayaa isticmaalayaan aalado badan oo ay ka mid tahay in ay dib u dhisayaan banbaanooyinkii loo isticmaalay qaraxyadii Oslo sannadii 2011, Madrid 2004 iyo middii uu isku soo xidhay ninkii isku qarxiyay Stockholm sannadii 2010. Sidoo kale waxay sameeyeen banbaanooyinkii isqarxiyayaashu u isticmaaleen qaraxyadii London, kuwaas oo ahaa maaddooyinka kimikaad oo la isku kariyay
– Midkani wuxuu la mid yahay banbaanadii Leeds, ee loo isticmaalay banbaanooyinkii London, nasiib daro wax kasta oo loo bahday samaynta banbaanada waxay ahaayeen, saxanka dabka, digsi ama disti iyo maaddooyin kimikaad.
--Waxay isticmaaleen daawooyinka wax lagu nadiifiyo oo la isku kariyay, middan oo saamaysa cimilada degaanka, ur ayay u keentay dadkii la dariska ahaa, dhirtii ka agdhawayd way dhimatay. Waxaanu samaynay banbaanada mid la mid ah, waxaanuna xaqiijinay in in ay middaas ahayd banbaano laga soo saaray shirkad. Ayuu leeyahay Henric Östmark , haddii la ogaan lahaa habkan sannadii 2005, waxaa la baajin kari lahaa, qaraxyadii London ee sahayday nafta kontomeeyo qof., sida uu aaminsan yahay Henric Östman gudoomiye ka ah machadka cilmi baadhista arrimaha gaashaandhiga ee FOI.
Banbaanooyinka lagu sameeyo guryaha dhexdooda ayaa hadda khatar aad u balaadhan, waxaana had iyo jeer loo adeegsada qaraxyada ismiidaminta ah ee ka dhaca goobaha khilaafyadu ka jiraan, sida Afqaanistaan, Ciraaq iyo Suuriya.
--Waxay noqdeen wax aad loo horumariyay, wakhtiyadii hore waxaa la isku dayi jiray in la soo xado aaladaha qarxa, middaas hadda way adkaaday, sababtaas weeye in hadda isku dayo in lagu samaysto guryaha dhexdooda. Sidoo kale internet ayaa laga helayaa macluumaad ku saabsan sida loo samaysan karo banbaano, middan oo hadda aad u fidaysa.
Khabiirada ayaa cilmi baadhista ay waddaan u adeegsanaya waxyaabo loo adeegsaday qaraxyo dhacay, sidoo kalena waxay isku dayayaan in ay diiwaangeliyaan sida ay u ekaan karaan qaraxyada argaggixiso ee mustaqbalku.